Vanopa Mhuka uye Fekitori | China Mhuka Vagadziri
Mouse Muswe Wakananga PCR Kit-UNG
2 × M1-PCR Easy TM Sanganisa (UNG) inoshandisa dUTP pachinzvimbo cheDTTP pahwaro hwe2 × M1-PCR Easy TM Mix (UNG), uye inowedzera UNG enzyme (Uracil-N-glycosylase) iyo inogona kudzikisira template ine DUTP pa nguva imwechete. Pamberi pePCR kuita, iyo enzyme yeUNG inoshandiswa kudzikisira iyo PCR chigadzirwa chine uracil. Iyo enzyme yeUNG haizove nemhedzisiro patemplate iyo isina uracil, nokudaro ichisimbisa iyo chaiyo uye kurongeka kwekusimudzira uye kudzivirira mukana wekuyera kukuru kwemajini. Kusvibiswa kwezvigadzirwa zvePCR zvakaitika.
Iyi kit inoshandisa yakasarudzika lysis buffer system kukurumidza kuburitsa genomic DNA kubva kune zebrafish uye mamwe emvura matsva ehove matishu, muswe mapini kana hove mazai masampuli ekushanduka kwePCR, saka inonyanya kukodzera kuyerwa kukuru kwemajini. Maitiro ekuburitsa genomic DNA kubva kune lysis buffer inopedzwa mukati memaminitsi 10-30 pa65 ° C. Hapana mamwe maitiro akadai seprotein uye RNA kubviswa anodikanwa, uye iyo yakaburitswa trace DNA inogona kushandiswa se template yePCR reaction.
2 × PCR Easy TM Sanganisa ine kushivirira kwakasimba kune PCR reaction inhibitors, uye inogona kushandisa lysate yemuenzaniso kuti iongororwe se template yekubudirira uye kwakasarudzika. Iyi reagent ine ForegeneD-Taq DNAPolymerase, dNTPs, MgCl2, reaction buffer, PCR optimizer uye stabilizer. Inoshandiswa pamwe chete neiyo lysis buffer inogona kukurumidza uye nyore kuona masampuli, uye ine hunhu hwekunzwisisa kwakanyanya, kusimba kwakasimba, uye kugadzikana kwakanaka.
Mbizi Hove Yakananga PCR Kit-UNG
2 × PCR Easy TM Sanganisa (UNG) inoshandisa dUTP pachinzvimbo cheDTTP pahwaro hwe2 × PCR Easy TM Sanganisa, uye inowedzera UNG enzyme (Uracil-N-glycosylase) iyo inogona kudzikisira template ine DUTP panguva imwe chete. Pamberi pePCR kuita, iyo enzyme yeUNG inoshandiswa kudzikisira iyo PCR chigadzirwa chine uracil. Iyo enzyme yeUNG haizove nemhedzisiro patemplate iyo isina uracil, nokudaro ichisimbisa iyo chaiyo uye kurongeka kwekusimudzira uye kudzivirira mukana wekuyera kukuru kwemajini. Kusvibiswa kwezvigadzirwa zvePCR zvakaitika.